बेलायतमा नेपाली माटोको सम्झना- विविधा - कान्तिपुर समाचार
पुस २२, २०७५ प्रा. सूर्य सुवेदी
काठमाडौँ — सन् २०१८ लाई इतिहासको गर्भमा बिदा गरी सन् २०१९ सुरु भएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वर्षको शुभारम्भले मलाई २०१८ ले कस्तो छाप छोडेर गएको छ र यसले २०१९ को संसारलाई कसरी प्रभावित पार्नेछ भन्ने कुराले सोच मग्न बनायो । आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई कायम राख्दै बेलायत ब्रेक्जिटतिरै अग्रसर छ ।
बेलायती महारानीबाट कानुनी क्षेत्रका उत्कृष्ट विद्धानलाई प्रदान गरिने उच्च उपाधि क्वीन्स काउन्सिल (क्यूसी) को उपाधी ग्रहणपछि प्रा. सुवेदी ।
ब्रेक्जिटले बेलायतलाई केही समय अवश्य नै नकारात्मक असर गर्नेछ। तर, बेलायतमा सुशासनको जग बलियो भएकाले संसारको बौद्धिक र वित्तीय राजधानीको रूपमा लन्डनको वर्चस्व कायमै रहनेछ। युरोपियन युनियनको धेरै अनावश्यक नियमनको चंगुलबाट मुक्त बेलायत सिङ्गापुर र स्वीटजरल्याण्ड जस्तै संसारको व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना छ। अमेरिकी राजनीतिमा देखिएको विसङ्गतिमा २०१९ मा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएका केही अपरिपक्वताका बाबजुद मुलुक लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने र आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने क्रममा अघि बढ्नेछ। विभिन्न उतारचढावका बाबजुद दक्षिण एसियामा लोकतन्त्रको जग दरिलो हुने मुलुकमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा छ। दुई वर्ष अघि नेपालमा आम निर्वाचन हुँदा कुनै पनि दलबाट निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्ने आवाजै नउठेको सुस्खद स्थिति छ भने बङ्गलादेशको हालैको विवादास्पद र हिंसाग्रस्त निर्वाचनको दुस्खद उदाहरण यही दक्षिण एसियामै छ।
मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि सन् २०१८ एक विशेष वर्षका रूपमा रह्यो। यो वर्ष मेरा स्वर्गीय पूज्य पिताजी पण्डित होमनाथ सुवेदीको शतवार्षिकी थियो र मैले यही वर्ष ६० वटा वसन्त पार गरेँ। उहाँले भर्खरै काठमाडौँमा उच्च शिक्षा सुरु गर्न लाग्दा हाम्रा हजुरबुवाको अल्पायुमै स्वर्गारोहण भयो र जेठो छोराको नाताले मेरो पिताजीले काठमाडौँको आफ्नो पढाइ छाडेर लमजुङ खुदी फर्किएर घर व्यवहार धान्नु पर्‍यो। चार भाइ र एक बहिनीलाई पढाउने, हुर्काउने र व्रतबन्ध गरी घरजम बसाइदिने सबै दायित्व पिताजीको काँधमा आइपुग्यो। त्यसपछि जन्मिएका हामी ५ दाजु भाइ र ५ दिदी बहिनीको लालनपोषण, शिक्षादीक्षा, व्रतबन्ध, विवाह सबै उहाँको काँधमा थपियो। तर, आफ्नो दायित्वबाट कत्ति पनि विचलित नभई हामी सबैलाई शिक्षादीक्षा दिनुभयो। गाउँको संस्कृत प्रधान पाठशालामा अध्यापन गर्ने देखि लिएर कमला प्रावि स्थापना गर्ने, ती विद्यालयको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई काम गर्ने जिम्मा पिताजीकै थियो। अहिलेको जमानामा असम्भव प्राय लाग्ने दायित्व त्यो बेलाको सीमित आयको भरमा पिताजीले कसरी पुरा गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दछ र ती कुरा सम्झँदा पिताजीप्रति मेरो सम्मान सय गुणा बढ्दछ। पिताजीले समाजमा जुन उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसले लमजुङको सेरोफेरो सबैमा राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको थियो। हाम्रो लमजुङको सुवेदी परिवारले जिल्लामा शिक्षाको ज्योति बाल्नेमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको थियो। अमर मावि मैले जहाँबाट एसएसलसी परीक्षा उत्तिर्ण गरेँ, त्यसको स्थापना, सञ्चालन र अध्यापनमा मेरा पिताजीको ठुलो भूमिका रह्यो।
म आफैँले व्यक्तिगत रूपमा जे जति उपलब्धि हासिल गरेको छु त्यसमा मेरो पिताजीले आर्जन गरेको धर्म र कठोर मिहेनतको छाप छ। मेरो प्राध्यापक, डाक्टर, ब्यारिस्टर, क्वीन्स काउन्सिल, अफिसर अफ द अर्डर अफ द ब्रिटिस अम्पायर, सुप्रवल गोर्खा दक्षिण बाहु, विशिष्ट श्रेणीमा कानुनाचार्य आदि सबै उपाधि र उपलब्धिको पछाडि पिताजीको योगदान छ। मेरो पिताजी मेरो पिताजीमात्र नभएर शिक्षक र मन्त्र सुनाउने गुरु समेत हुनुहुन्थ्यो। म सानै देखि विद्रोही स्वभावको छोरो थिएँ। चौध वर्षको कलिलो उमेरमै राजनीतिमा चासो राखेर आफ्नो विद्यालयको स्ववियू सभापतिमा निर्वाचित भएँ। पछि ल क्याम्पसमा पढ्दा जनमत सङ्ग्रह अगाडिको विद्यार्थी आन्दोलनमा जेल परेँ। तर, उहाँले कहिल्यै हिम्मत हार्नु भएन र मलाई रोक्नु भएन। मेरो राम्रा र नराम्रा उतारचढाव सबैमा उहाँको सहयोग र स्नेह निरन्तर कायम रह्यो। प्रवासमा रहेर नेपाललाई बौद्धिक योगदान दिने व्यक्ति भनेर गोदवाको मान पदवी पाउने सम्भवतस् म नै पहिलो थिएँ। बेलायतबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विशिष्ट श्रेणीमा प्रथम भई उत्तिर्ण हुँदा र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली म हुन पुगेकोमा पिताजीलाई ठुलो गौरव लागेको थियो। तर, मलाई दुस्ख लागेको कुरा मेरा सबै उपलब्धि सुन्ने र त्यसबाट सुस्खी हुने मौका उहाँले पाउनुभएन। उहाँको ७८ वर्षको उमेरमै निधन भयो।
प्रत्येक व्यक्तिको जिन्दगीको सफलता पछाडि विगतको पुस्ताको ठुलो योगदान रहेको हुन्छ। त्यसै गरी गत वर्षले नव वर्षलाई प्रभावित गरेको हुन्छ। आशा गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष २०१९ ले सबैलाई अतीतबाट पाठ सिक्ने र विगतको पुस्ताप्रति आभारी हुँदै भविष्यमा लम्कने प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। मैले दुई वर्षअघि बेलायती महारानीबाट कानुनी क्षेत्रका उत्कृष्ट विद्धानलाई प्रदान गरिने उच्च उपाधि क्वीन्स काउन्सिल (क्यूसी) पाउँदा अहिलेसम्म पिताजी जीवितै रहेको भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने लाग्यो। प्रत्येक सन्तानको उपलब्धिमा निस्स्वार्थ रूपमा बढी खुसी हुने माता पिता नै हुन्छन्। लन्डनको वेस्ट मिनिस्टरको राजाप्रसाद (राजदरवार) मा भएको सुशोभन समारोहमा मेरो पदवी लिन अघि बढ्ने क्रममा मलाई एक छिन रोकिएर मेरा मातापिता र नेपाली माटोलाई सम्झिएर प्रणाम गर्न इच्छा लाग्यो। मैले मेरो पदवी लिएपछि बेलायतका कानुन मन्त्रीले तपाईँ समारोहमा किन एक छिन रोकिनुभएको हो भनेर सोधे। मैले जवाफ दिएँ, मैले मेरा मातापिता र नेपाली माटोलाई जसले मलाई यहाँसम्म पुर्‍याए तिनैको सम्झना र तिनैप्रति अनुग्रहित हुन रोकिएको हुँ भनेँ। मेरा काका पण्डित श्री घनश्याम सुवेदी जो धर्मशास्त्र र ज्योतिषशास्त्रका विद्धान हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई आफ्नो हालैको बेलायत भ्रमणका क्रममा बाबु तिमीले बेलायत जस्तो उन्नत र अत्यन्त प्रतिष्पर्धात्मक मुलुकमा जति प्रगति गरेका छौँ त्यो र संसारमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि जुन योगदान दिएका छौ, त्यो तिम्रो पिताजीको पुण्यको फल हो भन्नु भएको थियो। पिताजीबाट पाएको शिक्षादीक्षा र संस्कृत विद्यालयमा पढ्दा हितोपदेश लगायतका नीति शास्त्रले देखाएको बाटोमा हिँडेर नै म यहाँ आइपुगेको हुँ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। त्यसैले सन् २०१८ लाई बिदा गरी सन् २०१९ लाई स्वागत गर्ने क्रममा मैले मेरा मातापिता र नेपाली माटोलाई पुनस् प्रणाम गर्दै २०१९ मा संसारमा सबैको भलो होस् भन्ने इच्छाका साथ आफ्नो प्राज्ञिक कलम अगाडि बढाउने प्रतिज्ञा गरेको छु।
– सुवेदी बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन्।
प्रकाशित : पुस २२, २०७५ १२:३०
घाम लाग, घाम लाग
काठमाडौँ — घाम लाग, घाम लागबादल छिटो भाग नजाडो भो ठिहिर्‍यायोआऊ न घाम आँगन
हेर न नाना हाम्रो
फाटेका छ बेसरी
लुक्यौ भने , तिमी
घाम तापौँ कसरी ?
भोक लागे खाना छैन
न जाडोमा नाना
छुन पनि पाएनौँ नि १
कपीका ती पाना
आमाबाबु छैनन् हाम्रा
टुहुरा हौँ हामी
आऊ न घाम यता आऊ
रमाइलो मानी ।
प्रकाशित : पुस २२, २०७५ १२:२४